Dhagax dixeed wuxuu horey u ogolaaday, iyadoo loo marayo Verizon, inuu ka jawaabo fariimaha ka yimid iPhone | Wararka IPhone
Isticmaalayaasha Pebble ee macruufka ee ka socda Verizon waxay bilaabayaan inay helaan cusbooneysiinta ay u baahan yihiin si ay ugu jawaabaan farriimaha, u diraan emojis ama xitaa uga jawaabaan farriimaha codka. Dhawr bilood ka hor ayaan kuu sheegnay qorshayaasha ay shirkaddu ku bixinayso suurtagalnimadaas kaasoo asal ahaan ka kooban Apple, sida ay tahay qalabka ku shaqeeya Android Wear, oo aan si toos ah uga jawaabi karin fariimaha qoraalka ah ee ka socda smartwatch-kaaga haddii ay ku xiran tahay iPhone.
Markii hore ikhtiyaarkan waxaa heli karay oo keliya isticmaalayaasha AT&T, oo ahayd tii ugu horreysay ee bixisa. Laakiin ka dib cusbooneysiinta nooca 3.1.1, codsiga lagu xakameynayo dhagax dixeedku wuxuu siiyaa fursado isku mid ah kuwa isticmaala hawlwadeenka Verizon. Mar alla markii aan cusbooneysiinno arjiga nooca ugu dambeeya, waa inaanu kicin karnaa ikhtiyaarka oo laga bilaabo xilligaas waxaan u diri karnaa emojis, jawaabo horay loo sii qorsheeyay oo aan horay u dhignay ama aan u diri karno farriimaha codka. Dabcan, ikhtiyaarkan ugu dambeeya waxaa lagu heli karaa oo keliya inta u dhexeysa Waqtiga, maaddaama moodooyinka hore aysan haysan makarafoon ay ku wada falgalaan.
Laakiin cusbooneysiintan cusub ayaa sidoo kale na keentay hagaajinta saxnaanta saacadaha hurdada lagu cabiro, suurtagalnimada in lagu celiyo alaarmiga oo aan ku dhignay Dhagax dixeed, xusuusin, ogeysiisyo marka lagu daro qaababka kale ee gariirka sidaa darteed waxay kuxirantahay gariirka aan ognahay ayada oo aan la eegin qalabka nooca ogeysiiska aan helnay.
Si loo dhammeeyo warka, soo saaraha Pebble wuxuu dib u magacaabay arjiga si uu u maareeyo smartwatch ka socda Waqtiga Jumcaleyda illaa Dhagaxaanta, sidan ayaan kaliya ku awoodi doonnaa inaan ku xakameyno Dhagaxyada kala duwan ee aan ka heli karno isla dalabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Dhagax dixeed wuxuu horey u ogolaaday Verizon, si uu uga jawaabo fariimaha ka yimid iPhone-ka
Waxaan haystaa aaladda quruurux ee dhagxaanta waxay sidoo kale ka shaqeysaa ama ay ka soo baxdaa jaajuurku
Aragti ahaan haa. Xaddidaadda kaliya ayaa ah suurtagalnimada in looga jawaabo farriimaha codka, taas oo ah Waqtiga Dhagaxleyda. Dabcan, waa la heli karaa oo keliya haddii hawl wadeenkaagu yahay AT&T ama Verizon.
HORE ALBA CHARO dijo
Doorashadan ayaa si khaldan loogu qaabeeyey My Pebble, sideen dib ugu dhigi karaa mahadsanid
Jawab CHARO ALBA HORE
Sida loo sameeyo akoon Apple ah cunug isticmaalaya Wadaagista Qoyska